Arjentiinaan tapha michoomaa Isiraa'el waliin ture haqxe - BBC News Afaan Oromoo
Arjentiinaan tapha michoomaa Isiraa'el waliin ture haqxe
Goodayyaa suuraa Liyooneel Mesiin yeroo Gaazaa keessatti poosteriirratti mullatu
Tapha Waancaa Addunyaa 21 guyyaa muraasan boodaa Raashiyaatti jalqabamuuf biyyoonni hirmaatan tapha michoomaa taphataa jiru. Arjentiinaan tapha michoomaa Isiraa'el waliin Sanbata darbe Yerusaalemitti taphachuuf turte walitti bu'insa Gaazaatti uumamaa jiruuf haqxeetti.
Arjentiinaan, qophiin michummaa ittiin of ilaaluuf karoorfame kun dhibbaa siyaasaa dhimma qabannaa Israa'el Palastaayini Gaazaa keessatti agarsiisaa jirtuuf haqxeetti.
Taphataan sarara fuula duraa Arjentiinaa Gonzaaloo Higuwiin chaanaalii ispoortii ESPN'tti Kibxata akka himetti taphichi haqameera.
"Dhumarratti waan gaarii ta'e hojjetan," jechuun dubbate Higuwiin.
Imbaasiin Arjentiinaa Israa'el keessa jiru fuula tiwiiter isaarratti baasuun akka mirkaneessetti taphni michoomaa kubbaa miilaa biyyoota lamaan gidduutti karoorfame hafeera jedha.
Miidiyaaleen akka gabaasanitti Ministirri Muummee Israa'el beenjaamiin Neetinyaahoo taphni michummaa Sanbata darbe gaggeeffamuuf ture akka hin hafneef Pirezedaantii Arjentiinaa Maarshiyoo Maakriitti dubbatanii turan.
Oduun haqamuu tapha kanaa yeroo dhaga'amu Gaazaa, bakka walitti bu'insa tibba kana uumameen yoo xiqqaate namoonni 120 ta'an keessatti ajjeefamanitti gammachuu guddaatu ture.
Westi Baank Raamaalaa keessatti waldaan kubbaa miilaa Palastaayin taphataa fuula duraa Arjentiinaa Li'ooneel Mesiifi hiriyyoota isaa galateeffachuun ibsa baase.
"Dudhaaleen, mooraaliifi ispoortiin mo'icha ar'a argame kana uumeera; tapha kana haquutiinis Israa'eliitti kaardiin diimaan agarsiifameera," jedhan dursaan waldichaa Jibriil Raajoob.
Gareen akka taphni kun haqamuuf duula gochaa turan Avaaz, tarkaanficha jajuun "murtee gootummaafi seera qabeessa" jedhan.
"Kun akka osoo lafa dhiyeenyarraa ilaammattoonni/isnaayiperoonni Israa'el mormitoota hidhannaa maleerratti rasaasaa dhukaasaa jiranitti Yerusaalem keessatti taphni taphatamu kan michummaa akka hin taane hubatteetti Arjetiinaan," jedhu Aliisi Jaay Daarikteerri Avaaz.